Ubunzululwazi bekhompyutha EsiSiseko
by UDan Mabbutt
Yintoni okufuneka uyiqonde ngayo kwindawo enye!
Ukuqwalaselwa komsebenzi yinkqubo yokuguqula into kwindawo elandelelanayo ye-bytes ebizwa ngokuba ngu "byte stream". I-Deserialization iphendulela le nkqubo. Kodwa kutheni ufuna ukuguqula into ibe ngumlambo we-byte?
Isizathu esibalulekileyo kukuba unako ukuhambisa into ejikeleze. Cinga ngamathuba. Ekubeni "yonke into yinto" kwi .NET, unokwenza into ethile kwaye uyigcine kwifayile. Ngoko unokwenza imifanekiso, iifayile zedatha, imeko yangoku yesimodyuli yenkqubo ('isimo' sifana nesicacisi seprogram yakho ngexesha elithile ukuze unqume okwethutyana ukusebenza kwaye uqale kwakhona).
nantoni na okufuneka uyenze.
Ungagcina ezi zinto kwi disk kwiifayili, ukuzithumela kwiwebhu, ziwadlulisele kwinkqubo eyahlukileyo, gcina ikopi yokukhusela yokukhusela okanye ukhuseleko. Amathuba afaneleke ngokwenene.
Yingakho i-serialization yinkqubo ebalulekileyo kule NET ne-Visual Basic. Ndibhalile malunga nayo ngaphambili, kodwa kweli nqaku, ndongeze igalelo kwi-serialization yangokwezifiso ngokufezekisa isixhobo esibonakalayo se- ISerializable kunye nokubhala i- New and GetObjectData subroutine.
Njengomzekelo wokuqala wokungqinisiswa, makhe senze enye yeenkqubo ezilula, kodwa enye yezona zinto zincedo kakhulu: idatha edityaniswayo, ize idibanise idatha kwiklasini elula ukuya kwiifayile. Kulo mzekelo, idatha ayifakiwe kuphela, kodwa isakhiwo se data sisindisiwe. Isakhiwo apha sivakaliswe kumnyuli ukuze kugcinwe izinto ... kakuhle.
Iqela likaRhulumente kwiPom Example
I-Parm1Name yoLuntu njengeString = "Parm1 Igama"
I-Parm1 yoLuntu iValue njenge Integer = 12345
I-Parm2Name kaRhulumente njengeCandelo
Public Parm2Value As Decimal
I Module yokugqibela
Emva koko, imilinganiselo yodwa ingagcinwa kwifayile efana nale:
Ukungenisa iNkqubo yeSizwe
Ifom yeSizwe yeFom1
Incinci yangasese mySerialize_Click (_
Umthumeleli we-ByVal NjengeNkqubo.Object, _
ByVal e NjengeNkqubo.EventArgs) _
Dim ParmData Njengomzekelo omtsha
ParmData.Parm2Name = "Igama leParm2"
ParmData.Parm2Value = 54321.12345
I-Dim s NjengoFayile entshaStream ("ParmInfo", FileMode.Create)
Dlulisa njengeNew BinaryFormatter
f.Serialize (s, ParmData)
Kwaye ezo zixabiso ziyakuthi zifunyenwe njengale:
I-Sub Sub yangasese myDeserialize_Click (_
Dim s = Ifayile entshaStream ("ParmInfo", FileMode.Open)
I-Dim RestoredParms NjengeParm Example
Ukubuyiswa kweParms = f.Deserialize (s)
Ikhonsoli.WriteLine (Ukubuyiswa kweParms.Parm1Name)
Ikhonsoli.WriteLine (Ukubuyiswa kweParms.Parm1Value)
Ikhonsoli.WriteLine (Ukubuyiswa kweParms.Parm2Name)
Ikhonsoli.WriteLine (Ukubuyiswa kweParms.Parm2Value)
Isakhiwo okanye ukuqokelela (njenge- ArrayList ) kunokuba iClassi ingasetyenzwa kwakhona kwifayili ngale ndlela.
Ngoku ukuba siye ngaphaya kweprogram ye-serializing, qwalasela ukujonga iinkcukacha ezithile eziyinxalenye yenkqubo kwiphepha elilandelayo.
Enye yezinto zokuqala omele uqaphele ngalo mzekelo yi- impawu kwiCandelo . Iimpawu zinolwazi olungaphezulu onokukubonelela ngeVB.NET malunga nento kwaye zisetyenziselwa ezininzi izinto ezahlukeneyo. Ngenkcazo ecacileyo yeempawu, zama iinqununu zam inqaku malunga neempawu kwiVB.NET. Funda le ngxelo apha . Umxholo kule khowudi uxelela i-VB.NET ukuba ungeze ikhowudi eyongezelelweyo ukwenzela ukuba emva koko, yonke into eklasini iyakunikwa.
Ukuba kukho izinto ezithile kwiClassi ukuba awufuni ukucwangciswa, ungasebenzisa i- umxholo wokuba ungabandakanyi kuwo:
Public Parm3Value As String = "Nayiphi na into"
Kulo mzekelo, isaziso kukuba i- Serialize kwaye i- Deserialize iindlela zeBhanaryFormatter into ( f kulo mzekelo).
Le nto ithatha into yeFayileStream kunye nento ukuba ilandelwe njengeparitha. Siza kubona ukuba iVB.NET inikeza enye into evumela ukuba isiphumo sichazwe njenge-XML.
Kwaye enye inqaku lokugqibela, ukuba into yakho iquka ezinye izinto ezingezantsi, ziya kulandelwa! Kodwa ekubeni zonke izinto ezithintekayo kufuneka ziphawulwe nge- impawu, zonke izinto zezingane kufuneka zimakwe ngale ndlela.
Ukuze ucacise ngokucacileyo malunga noko kwenzekayo kwiprogram yakho, unokufuna ukubonisa ifayile egama linguParDData kwi-Notepad ukuze ubone ukuba yiphi idatha edityanisiweyo ibonakala ngathi.
(Ukuba ulandele le khowudi, kufuneka ibe kwifolda yeDubug kwiprojekthi yakho.) Ekubeni le fayili yebhanari, uninzi lomxholo awufundwanga umbhalo, kodwa kufuneka ukwazi ukubona nayiphi na imingcipheko kwi-serial yakho. ifayile. Siza kwenza i-XML version elandelayo kwaye unokuba ufuna ukuthelekisa ezimbini ukuba nje uqaphele umehluko.
Ukuqwalasela kwi-XML esikhundleni sefayili yebhanari idinga utshintsho oluncinane. I-XML ayikho ngokukhawuleza kwaye ayikwazi ukubamba ulwazi oluthile lenkcazelo, kodwa lukhulu kakhulu. I-XML ingasetyenziselwa malunga nayiphi na iteknoloji yesofthiwe kwihlabathi namhlanje. Ukuba ufuna ukuqiniseka ukuba izakhiwo zakho zefayile "azibopheli" kwiMicrosoft, oku kuyindlela efanelekileyo yokujonga. UMicrosoft ugxininisa "i-LINQ ku-XML" ukwenza iifayile ze-XML yedatha kwi-teknoloji yakutshanje kodwa abantu abaninzi banokukhetha le ndlela.
I-'X 'kwi-XML imele i- X efanelekileyo. Kwisibonelo sethu se-XML, siya kusebenzisa enye yalezo zandiso ze-XML, iteknoloji ebizwa nge- SOAP . Oku kusetyenziselwa ukuthetha "iProjekti yokuFumana okuFineneyo" kodwa ngoku ligama nje. (I-SOAP iye yaphuculwa kakhulu kangangokuba igama langaphambili alifani naloo nto.)
Into ephambili ekufuneka siyitshintshe kwiinkomfa zethu kukuhlaziywa komfaki-fomati wefayile. Oku kufuneka kutshintshwe kwimbini engezantsi ejonganisa into kunye neyayifaka kwakhona. Kuqwalaselo olungagqibekanga, oku kubandakanya ukutshintsha ezintathu kwinkqubo yakho. Okokuqala, kufuneka udibanise i-Reference kwiprojekthi. Nqakraza iqhosha le projekthi uze ukhethe Yongeza I-Reference .... Qiniseka ...
... yongezwe kwiprojekthi.
Emva koko utshintshe izitatimende ezimbini kwiprogram ebhekisela kuyo.
Nciphisa njengeNew SoapFormatter
Eli xesha, ukuba ukhangele enye ifayile yeParmData kwi-Notepad, uya kubona ukuba yonke into ifumaneka kwimiyalezo ye-XML efana ne ...
Kukho kwakhona i-XML eyongezelelweyo apho kufuneka ukuba umgangatho we-SOAP kwifayile kunye. Ukuba ufuna ukuqinisekisa ubungqina be , unokongeza iguquko kunye naloo mbonakalo kwaye ujonge kwifayile ukuqinisekisa ukuba ayifakiwe.
Umzekelo esiwubhalise kuphela ulandelelwano lweedatha, kodwa mhlawumbi kufuneka ulawule indlela idatha echithwe ngayo. VB.NET inokukwenza oko!
Ukuze ufezekise oku, kufuneka ufumane ubuncinci kumbono wokucwangcisa. I-VB.NET inento entsha ukukunceda apha: I- SerializationInfo . Nangona unako ukukhangela indlela yokuziphatha yangokwezifiso, kufike ngeendleko zokubhaliweyo kwekhowudi.
Ikhowudi eyongezelelweyo eyongezelelweyo iboniswe ngezantsi.
Khumbula, le klasi isetyenziswe endaweni yesigaba seParmEmboniso esiboniswe kumzekelo wangaphambili. Lo awumzekelo opheleleyo. Injongo kukukubonisa ikhowudi entsha efunekayo kwi-serialization yangokwezifiso.
ICandelo loLuntu lweSeteriSerialization
'idatha ukuba ilandelwe apha
'I-Publicalized SerializedVariable njengohlobo
Intsha entsha yeSizwe ()
'umenzi wendalo xa kukho iklasi
'idalwe - ikhowudi yesithethe ingaba
'wongezwa apha kwakhona
Olutsha olutsha (_
Ulwazi lwe -VV
Umxholo weVival As StreamingContext)
'uqalise iinkqubo zakho eziguqukayo ukusuka
'ivenkile yedatha edibeneyo
Isiqendu sikaRhulumente se-GetObjectData (_
Umxholo we-ByVal Njengo-StreamingContext) _
'ubuyekeze ivenkile yedatha elandisiweyo
Ingcamango kukuba ngoku unako (kwaye, enyanisweni, kufuneka ) wenze konke ukuhlaziywa nokufunda kwedatha kwisitoreji sedatha esicatshulwa kwiNew and GetObjectData . Kumele uquke umakhi omtsha wesiqhelo (akukho uluhlu lweparimeter) kuba uzalisekisa umsebenzisi.
Iklasi ngokuqhelekileyo iya kuba neepropati ezisemthethweni kunye neendlela ezibhalwe kunye ...
Ipropati Yoluntu OlutshaNgcono () NjengeString
Setha (ValueV Byal njengeString)
newPropertyValue = xabiso
I-Sub SubMystem yomgaqo ()
Iklasi edibeneyo eyenziwa yinkcazo inokudala iimpawu ezizodwa kwifayili esekelwe kwikhowudi oyinikezelayo. Ngokomzekelo, iklasi langempela lendawo lingahlaziya ixabiso kunye nedilesi yendlu kodwa iklasi iya kulandelelanisa ukwahlula kweemarike kubalwa.
I-Subroutine entsha iya kujonga into enje:
Parm1Name = ulwazi.GetString ("a")
Parm1Value = info.GetInt32 ("b")
Intsha entsha iyaqhubeka ...
Xa i- Deserialize idluliselwa kwi- BinaryFormatter into, le nxalenye iphantsi kwaye i- SerializationInfo into idluliselwe kwi-Subroutine entsha . Entsha inokuyenza nayiphi na into efunekayo ngexabiso elichanekileyo leenkcukacha. Umzekelo ...
MsgBox ("Le yiParm1Value Times Pi:" _
& (Parm1Value * Math.PI) .ToString)
Ukutshintsha kwenzeka xa i- Serialize ibizwa, kodwa i- BinaryFormatter yenza into ethi GetObjectData esikhundleni.
Ukuba iParm2Name = "Uvavanyo" Emva koko
info.AddValue ("a", "Olu luvavanyo.")
info.AddValue ("a", "Akukho mvavanyo kweli xesha.")
info.AddValue ("b", 2)
Qaphela ukuba idatha yongezwa kwifayili elandelwayo njengegama / ixabiso lembini.
Uninzi lwamaphepha ewebhu endifumene ngokubhala eli nqaku alibonakali ukuba nekhowudi yokusebenza. Omnye uyazibuza ukuba ngaba umbhali wenzelwe nayiphi na ikhowudi ngaphambi kokubhala eli nqaku ngamanye amaxesha. Yonke ikhowudi esebenzayo apha ingalandwa kule sixhumanisi!
Indlela yokucacisa i-Spot iVarnish kwiFayile yeDivayili
Iingcebiso ezilishumi zokuCoding Excel VBA Macros
Umhlobo kunye noMhlobo Okhuselekileyo kwiVB.NET
Indlela yokusebenzisa iNkqubo.Qalisa kwiSiboniso esiSiseko
Qalisa iiFayile zeBatch (ii-DOS Commands) ezivela kwi-Visual Studio
Ukuguqula umbhalo ukuya kwi-Excel
Iifayile "vbproj" kunye "sln"
Isingeniso sokuxubusha kwi-VB.NET
Davidson College GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Umbono woBuntu bokuqala
IiNcwadi eziPhambili zeMfazwe ezili-10
Indlela yokudibanisa "Ukufeza" (ukufezekisa)
Iingcebiso ezi-6 zokuvavanya iRed Wet ngaphambi kokunyuka
Ubunzima Kangakanani Ubunokufumana Ngosuku?
Ukuchaza 'i-Waste Bunkers' kunye 'neendawo zokuNkunkuma' eGoli
Ikhalenda yeFundays: ngoJuni
Indlela iFhysicist ichaza ngayo amandla okuHla
Amanqabana omthi womthi: I-Toothed kunye nayo yonke: I-Key Leaf Key
Nwabisa umdlalo we-Word Search Puzzle
Ukubunjwa kwee-Gold Alloys kwiimpahla zegolide zegolide
'Ixesha Elimnandi Elixoki' Inkcazo 1
I-Atomic Mass Definition - Weight Atomic
Uluhlu lweeNkcukacha ngeeNkqubo zeeKholeji